Masaajid lacag badan ku caawiyay qoys masiixiyiin ah oo ay ku dhacday musiibo aan la maleysan karin | Haldoor News
Masaajid lacag badan ku caawiyay qoys masiixiyiin ah oo ay ku dhacday musiibo aan la maleysan karin
Jameecada ku xiran masaajidka Abubakar As-Saddique Islamic center ee ku yaalla magaalada Faribault ee gobolka Minnesota ayaa u istaagay inay caawiyaan qoys daris la ah oo la tacaalaya musiibo aan la maleysan karin.
Inkastoo uu jiro farqi dhinaca diinta ah oo u dhaxeeya jameecada iyo qoyska oo masiixiyiin ah, haddana masjidka ayaa sameeyay guddi ka shaqeeya in la caawiyo, ka dib markii wiil ay dhaleen uu ku dhintay si qeyrul vaadi ah, halka mid kalena uu soo ritay xanuunka kansarka.
Wiilka oo dhintay bishii Disembar ayaa cunay raashinka loogu talagalay bisad ay qoyskan xannaaneysanayeen, arrintaas oo sababtay geeridiisa.
Cunuga kale oo da’diisa lagu sheegay 10 jir ayaa isagana aad ula ildaran kansar awood badan oo halis galinaya naftiisa.
Muddo hal saac gudaheed ah ayey culumada masjidka aruuriyeen kumannaan doolar, iyagoo sidoo kalena u duceeyay qoyskaas.
Lacagtii la aruuriyay ayaa lagu sheegay inay gaareyso 6,000 oo doolarka Mareykanka ah.
Qooyskan aan Muslinka aheyn ayaa waxaa ay caawimaad weeydiisteen masuuliyiinta masaajidka.
Sheekh Cabdifitaax Sheekh Cumar, oo ah maamulka Maasjidka ayaa BBC-da u sheegay inay caawimaadan uga gol lahaayeen si ay u dareensiyaan qoyskan inay Diinta Islaamku tahay mid Naxariis iyo nasteexo.
“Runtii dadku ma maleeysanayn inay muslimiintu caawinkaraan masiixiyiinta, balse waxay ku noqtay arrin aad u la yaab leh, waliba dadka xoogga uga fal celieyey waxaa ay u badnaayeen dadka cadaanka ah,” ayuu yidhi Sheekh Cabdifatax.
Waxa uu sidoo kale sheegay inay ahayd markii ugu horreysay ee ay sameeyaan caawimaada noocaasi ah, isagoona mas’uuliyinta kale ee Masaajidyada ku boorriyay inay taakuleeyan dadka haysta diimaha kale, taasi oo ku sababeeyey inuu sidan sameyn jiaray suubaneheeni Muxammad (CSW), si uu dadka u dhadhansiiyo naxriista iyo nasteexda ay leedahay diinta Islaamka.
“Nabigu dad aan muslim ahayn ayuu intaasoo neef u qali jiray, uuna soo dhaweyn jiray, aniguna waxaan ku boorrinayaa masaajidyada kale inay ka war qabaan dadka dariskooda ah ayna muujiyaan inay wax caawin karaan”, ayuu yidhi.
Faribault oo ah magaalo yar ayaa waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 23,000 oo ruux.